अखबार - Pahilo News
‘वार’ कलेज खोल्ने रक्षा मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौँ, १७ भदौ । रक्षा मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी नेशनल डिफेन्स कलेज (वार कलेज) खोल्ने तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा/प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन/अध्यापान तथा रणनीति सम्बन्धी प्राज्ञिक केन्द्रका रुपमा नेशनल डिफेन्स कलेज र विश्वविद्यालय सरकारै लगानीमा सञ्चालन गर्ने रक्षाको का..
निर्मला हत्या प्रकरणः विश्वस्त छैन परिवार
काठमाडौँ, १७ भदौ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका अभिभावक दोषी पत्ता लाग्नेमा आशं..
काठमाडौँ, १७ भदौ । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जगा खरिदमा ठुलो परिणामको बजेट खर..
काठमाडौं, १६ भदाै । बूढानिलकण्ठ नगरपालिका बिष्णुमती टुसालमा शुक्रबार जमिन फाटेपछि चार घर भ..
सरकारविरुद्ध चिकित्सक आन्दोलित
काठमाडौं, १६ भदाै । १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनले बिरामीहरूको सहज उपचारमा कठिनाइ उत्पन्न..
काठमाडौं, १६ भदाै । १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना सेलाउन नपाउँदै कञ्चनपुरमै अर्की १६ वर्षीया किशोरी सामूहिक बलात्कारमा परेकी छिन् । बेलडाँडी गाउँपालिकाकी किशोरीको बिहीबार राति बलात्कार भएको हो ।चिनजानकै एक युवकले फोन गरेर उनलाई घरनजिकैको सडकमा बोलाएका थिए । त्यहाँ दुई मोटरसाइकलमा चार युवक थिए । उनीहरू..
काठमाडौं, १६ भदाै । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिहीबार साँझबाट बालुवाटार छाडेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि २० साउनदेखि उनि बिदामा छन् । ५ चैतदेखि प्रधानन्यायाधीशनिवास बालुवाटार बस्न थालेका जोशी बिहीबार धुम्बाराही स्थित आफ्नै निवास सरेका हुन् । १ चैतमा तत्कालीन प्रधानन्य..
हेटौंडा, १६ भदाै । प्रदेश प्रहरी ऐनको विषयलाई लिएर प्रदेश र संघबीच विवाद देखिएको छ । प्रदेश मामिला समितिले हेटौंडामा गरेको ‘संघीयतामा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेश प्रहरी’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संविधान बनाउनेले नै मिचेको आरोप लगाए । ‘संघीय सरकारले नै कानुन मिचेको छ,..
गोप्य मन्दिर बनाउन विदेशी गुहारिँदै विभाग
काठमाडौं, १६ भदाै । हनुमानढोका दरबारभित्रको गोप्य मन्दिरमध्येमा पर्छ आगम्छे । शाहवंशभरि बन्द रहेको मन्दिर हाल पनि बन्दै छ । तान्त्रिक दीक्षा पाएका बाहेक कोही छिर्न नहुने मान्यता रहेका मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न पुरातत्व विभागले जापानलाई दिने तयारी गरिरहेको छ । जापानको सर्त पूरा भयो भने अबको केही दिनमा जापानीहरु मन्दिरभित्र प्रवेश ग..
बाहिरी चक्रपथः मापदण्ड विपरीत कित्ताकाट
काठमाडौं, १६ भदाै । सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा तोकिएको सडकसीमाभित्र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मापदण्डविपरीत जग्गा कित्ताकाट गरिएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । चोभार सतुंगलबीचको करिब ६ किलोमिटर खण्डमा ३ आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गरिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको ..
काठमाडौं, १६ भदाै । नेपालमा अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छ । तर, कतिपय यस्ता नेपाली उत्पादन पनि छन् जसले विदेशमा पनि राम्रो पहिचान बनाएका छन् । । वाइवाइ चाउचाउ नेपालीको मात्र होइन, तीन दर्जन मुलुकका भान्सामा पाक्छ । गोल्डस्टार नेपालमा भन्दा भारतमा बढी चर्चित छ । चाउचाउ वाइवाइ चाउचाउ नेपालीको भान्सामा मात्रै होइन, विश्वका तीन ..
सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाको दादागिरी, चन्द घाइते
बर्दिया, १६ भदाै । सीमावर्ती गाउँमा बस्ने राजापुर–६ का गोपाल चन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट आइतबार घाइते भए । नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा उपचारपछि चन्दको अवस्था सामान्य भए पनि उनको परिवार अझै त्रसित छ । सीमा नजिक बसोबास भएकाले भारतीय सुरक्षाकर्मीले चन्दलाई पुनः आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने परिवारको आशंका छ । भदौ ५ गते जंग..
काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको समझदारी
काठमाडौं,१६ भदाै । नेपाल-भारतबीच काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको ब्रोडगेज लाइनसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार भएको द्विपक्षीय छलफलपछि समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा यससम्..
काठमाडौँ, १५ भदौ । बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने पाहुनालाई देखाउन ठाउँ ठाउँमा राखिएका ब्यानरमा प्रयोग भएका तस्बिर फोटो पत्रकारको अनुमतिबिनै प्रिन्ट गरेर टाँगेको छ । आफूले खिचेको फोटो अनुमति बिनै सडक छेवैको ब्यानरमा टाँसेको देखेपछि फोटो पत्रकारले त्यसबारे गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफूले दुख गरेर खिचेको फोटो सरकारी निकायले अनुमतिबिनै ..
चिकित्सकले एकमुष्ट लाइसेन्स बुझाउने
काठमाडौँ, १५ भदौ । चिकित्सकसँग भएको मौखिक सहमति अनुरुप सरकारले कानुन संशोधनन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना सदस्य चिकित्सकको लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एकमुष्ट बुझाउने तयारी गरेको छ । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले चिकित्सकसँग गरेको सहमतिमा सरकार गम्भीर र इमानदार नदेखिएकाले लाइसेन्स बुझाउने निर्णय ..
काठमाडौँ, १५ भदौ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरुमध्ये ४ जना भोलि (शुक्रबार) नै फर्कने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमार राष्ट्रपति ..
काठमाडौँ, १५ भदौ । सुदूर पश्चिमाञ्चलका अधिकांश पहाडी जिल्ला छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरेपनि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा छाउपडी गोठ अझै कायमै रहेका छन् । अछामको धेरैजसो क्षेत्रमा छाउपडी प्रथालाई कायमै राख्ने गरेको पाइएको छ । जिल्लाको अन्य क्षेत्र भन्दा ढकारी गाँउपालिकामा छाउपडी गोठ बढी मात्रामा रहेका छन । रजस्वला भएको वेला महिलालाई दूध,..
काठमाडौँ, १५ भदौ । सरकारले ८ वटा कडा रोग लागेका बिरामीको उपचारमा विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत एक बर्षमा झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत बर्ष २१ हजार ८ सय १६ बिरामीले उपचार खर्चवापत २ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ अनुदान लिएको जानकारी स्वास्थ्य सेवा मिभागको […]
रानीपोखरीमा डुब्दै ३ करोड !
काठमाडौँ, १५ भदौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी निर्माणमा संलग्न ठेकेदारलाई भुक्तानी रकम दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । रानीपोखरीलाई प्रताप मल्ले बनाएको शैलीमा निर्मा गर्न हालका विभिन्न संरचना भत्काउनुपर्छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पालना गरे रोनीपोखरी बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने..
काठमाडौँ, १५ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएको ५० दिन बित्दा पनि चाबहिल-जोरपाटी सडकखण्डका खाल्डाखुल्डी पुरएिको छैन । प्रधानमन्त्रीले असार २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका प्रमुखलाई कार्यालयमा बोलाएर कंलकी-थानकोट, चाबहिल-जोरपाटी-बौद..
१५ सय तिर्न ३० हजार खर्च
काठमाडौँ, १५ भदौ । जिल्लाका साना व्यवासायीलाई करबापत १५ सय रुपैयाँ तिर्न ३० हजार बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करसम्बन्धी कारोवार गर्ने कुनै निकाय जिल्लामा नहुँदा साना व्यवसायीसमेत प्रदेश ५ को नेपालगन्ज जान बाध्य छन । करसम्बन्धी कारोबार गर्ने कुने पनि निकाय जिल्लामा नहुँदा साना व्यवासायीसमेत प्रदेश ५ को नेपालगन्ज जन बाध्य ..
काठमाडौँ, १५ भदौ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भएको तीन महिना बितिसकेको छ । तर, सिंहदरबारमा नेकपा संसदीय दलको कार्यालय भने अझै एउटै हुन सकेको छैन । एकै कार्यालयको अभावमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका सांसद सिंहदरबारमा एकै ठाउँमा भेटिँदैनन् । संघीय संसद् सचिवालयले ए..
काठमाडौँ, १५ भदौ । भनाई नै छ — गोरु ब्याउँदैने, दुध पनि दिँदैन । तर, यति बेला हेलम्बु गाउँपालिकाको इचोक, पुरानागाउँका सोनाम तामाङको घर पुग्ने जोकसैलाई यो भनाई झुटो लाग्न सक्छ । तामाङ दिनहुँ गोरु दुहुन्छन्, त्यसको दुध गाउँलेलाइ प्रसाद बाँड्छन् । भन्छन् — विहान बेलुकी गरेर एक मानाजति दिन्छ पहिले कहीकतै नदेखेको नसुनेको यो [&helli..
काठमाडौँ, १४ भदौ । कञ्चनपुरमा १५ दिनको अन्तरमा दुई बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । २६ असारमा घरबाट किताब किन्न भनेर हिँडेकी कृष्णपुर नगरपालिका– ८ की १७ वर्षीया कविता विष्टको बलात्कारपछि हत्या भएको १५ दिनपछि नै १० साउनमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो ।, यस वर्षको साउनमा मात्रै कञ्चनपुरमा बलात्कारका स..
सरकारी त्रुटीका कारण कारगेड दुर्घटना
काठमाडौँ, १४ भदौ । सरकारी त्रुटीका कारण बुधबार बिहान भिभिआइपी सुरक्षा कारगेड दुर्घटना भएको छ । बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्टको स्कर्टिङका क्रममा कारगेड मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको हो । नेपाल प्रहरीले भिभिआइपीको स्कर्टिङका लागि सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएका मोटरसाइकललाई सरकारले मर्मत संभार गरेर सञ..
पौडेल र सिटौलाबीच फाटो
काठमाडौँ, १४ भदौ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पुर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलीबीच अविश्वास बढेको छ । अविश्वासकै कारण सिटौलाले आफुनो नेतृत्वको तेस्रो धारलाई क्रियाशील बनाउने अभियान थालेका छन् । अनपुम फुडल्यान्ड पार्टी प्यालेसमा बुधबार आफ्नो पक्षका नेता कार्यकर्तालाई सहभागी गराएर सिटौलाले यस्तो सकेत दिएका हुन् । जीप..
नेकपामा एकीकरण भइनसक्दै आन्तरिक द्वन्द्व
काठमाडौँ, १४ भदौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद चुलिएको छ । जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओपादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ बनेको नेकपामा तीन महिनाकै आन्तरिक कलह चुलिएको कारोबारमा खबर छ । केन्द्रमा सिफारिस गरिएका जिल्ला र अन्य कमिटीकोे नामावली प्रति नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । खासगरी पाँच [..
सेनाको नेतृत्वमा चार घेरामा सुरक्षा, उपत्यकामा हवाई गस्ती
काठमाडौँ, १३ भदौ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । काठमाडौंमा पहिलोपटक हुन लागेको सम्मेलनका लागि सरकारले नेपाली सेनालाई सुरक्षा नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्य..
मोदीसँग भेट्न राजपाका नेताहरुको लबिङ
काठमाडौँ, १४ भदौ । बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुले लबिङ गरेका छन्र । मोदीसँग भेट्न पाए राजनीतिक छलफलबाट नयाँ राजनीतिक एजेण्डा बनाउन पार्टीलाई सहज हुने पार्टीका नेताहकरुको बुझाइ छ । पार्टीका नेताहरुलाई बुधबार र बिहीबार हुन..
‘अयोग्य’ झालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा पुनः नियुक्ति !
काठमाडौँ, १४ भदौ । काम गर्न नसकेको भन्दै बर्खास्त गरिएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पुनः अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सिफारिस समितिले अन्य दुई जना सहित झालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको हो । मन्त्रालय उच्च स्रोतक..